ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ဖုန်မှုန့်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Cold Cream! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ဖုန်မှုန့်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Cold Cream!
အသာအယာပွတ်တိုက်ရုံနဲ့ မျက်နှာပြင်ရှိ ဂျေးညှော်တွေနဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Cold Cream လေးကို Kate Somerville ကနေ ချပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Product လေးဟာ ဖယ်ရှားရခက်ခဲလွန်းတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အဆီနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို အသားအရေ အတွင်းဆုံးပိုင်းအထိ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး နူးညံ့တဲ့အသားအရေလေးကို ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်ဝန်းတဝိုက်ရှိ ရေစိုခံ Mascara, Eyeshadows တွေကိုလည်း ဖျက်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Remover အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက အသားအရေကို ပြန်လည်စိုပြေစေနိုင်ပါသေးတယ်။ Sulfate-Free ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေပြား ဓာတ်မတည့်ခြင်းမျိုး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေလည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးချက်များအရ တကြိမ်စမ်းသပ် အသုံးပြုပြီးနောက် သိသိသာသာ စိုပြေလာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
အသားအရေကို ပိုမိုနူးညံ့စေပြီး ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် White Honey နဲ့ စံပယ်, နှင်းဆီ နဲ့ ဒေစီပန်းတို့လည်း ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ပိုမိုနူးညံ့စေပါတယ်။ မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုတဲ့အခါ မျက်နှာအနှံ့နှိပ်နယ်ပေးပါက ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ ရေစိုအဝတ်နဲ့ မျက်နှာအနှံ့ သုတ်ပေးပြီး သန့်စင်ပေးရပါမယ်။ Luxury Brand ဖြစ်တဲ့အပြင် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝရယူထားနိုင်တဲ့ Product ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေအသွေးပိုင်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးပေါ့။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၄၈ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူလိုပါက Beauty Glory – USA Branded Online Shop တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source : www.katesomerville.com